7 months, 3 weeks ago 1580 Qoodi
Himatamtoonni 24 galmee Jawaar Mohaammad faa jalatti himataman har'a eegalee dhimma isaani hordofuuf mana murtii akka hin dhiyaanne beeksisan. Himatamtoonni kun "ajjeechaa jumlaa fi bulchiinsa seeraan alaa" naannoo Tigraayitti adeemsifamaa jiru mormuuf guyyaa lamaaf lagannaa nyaataa akka gaggeessan ibsaniiru.
Dhaddacha har'aa irratti qaamaan kan argaman himatamtoonni 21 hayyama mana murtii malee lammiilee naannoo Tigraay, Oromiyaa keessattuu dargaggoo magaalaa Dambi Doollootti ajjeefame (Amaanu'eel Wandimmuu), akkasumas kanneen bakkoota adda addaatti lubbuu isaani dhaban yaadachuuf daqiiqaa tokkoof kadhannaa sammuu gochuun dhaddacha eegalchiisaniiru.
Himatamtoonni kunniin murtoo 'mana murtii hin dhiyaannu' jedhu kana iyyannoo barreeffamaan Mana Murtii Olaanaa Federaalaa Dhaddacha Ramaddii Lidataa har'a Caamsaa 18/2013 dhiyeessaniiru. Dhaddacha kana irratti haasaa kan taasisan Obbo Jawar Mohaammad, dhimma Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi himatamtoota biroo kaasuun ajajni mana murtii kabajamaa akka hin jirre dubbataniiru.
"Nuti as kan dhufne yoo nurratti murtaa'e adabamuuf, yoo bilisa jedhamne bahuufidha" kan jedhan obbo Jawar, "har'a jalqabe fedhii keenyaan mana murtii hin dhiyaannu," jedhan.
Yaada Obbo Jawar deeggaranii haasaa kan taasisan Obbo Baqqalaa Garbaa gama isaanin, "dirqamaan harkifamne fi haleelamne yoo ta'e malee gara mana murtii kana hin dhufnu," jedhaniiru.
Ammaan booda mana murtiitti dhiyaachu akka hin barbaanne ibsu isaani dabalataan haala naannoo Tigraay keessa adeemaa jiru mormuun ummanni naannichaa lagannaa nyaataarra waan jiruuf, isaanis guyyaa lamaaf nyaata akka hin nyaanne ibsaniiru.
Obbo Jawar fi obbo Baqqalaa itti aanuun haasaa kan taasisan miseensa Kongireesii Federaalawaa Oromoo (KFO) Obbo Dajanee Xaafaa, hayyama mana murtii ala kan dubbatan yoo ta'u, "ummanni Oromoo biyyatti kanaaf diina ta'e labsameera,...yaa ummanni Oromoo tokko ta'aatii mootummaa kana haa falmannu," jechuun waamicha dhiyeessaniiru.
Manni Murtichi yaada himatamtoonni kun kaasan irratti deebii, "Amantaan keenya yoo isin bilisa taatan, isin bilisa baasuudha" jechuun isa kanas adeemsa keessa akka mirkaneessu waadaa galeera.
Dhumarratti manni murtichi beellama lama kan kenne yoo ta'u, beellamni tokkoffaa Abbaan Alangaa yaaddoo nageenya ragaa baatoorra qabu tarreesse Caamsaa 30/2013 karaa registaara mana murtichaan akka galchu, akkasumas beellamni lammaffaa, Abukaatoonni himatamtoota yaaddoo nageenya abbaa alangaa dhiyeessu irratti Waxabajjii 10/2013 dhaddacha irratti akka dhiyeessan ajaja kenneera.